Safal Khabar - मौनीको नखरा
बुधबार, २९ जेठ २०७६, २१ : ४२
काठमाडौं । भारतीय टेलिसिरियल हुँदै ठूलो पर्दामा पुगेकी मौनी रायले नागिनको भूमिकाबाट जसरी दर्शकको मनमा छाप छाड्न सफल भएकी थिइन्, त्यस्तो सफलता ठूलो पर्दाबाट पाइसकेकी छैनन् । उनले डेब्यु नै गोल्डेन ब्वाई अक्षय कुमारको फिल्म ‘गोल्ड’बाट गरेकी थिइन् ।
दोस्रो फिल्म जोन अब्राहमको अपोजिटमा ‘रोमियो अकबर वाल्टर’मा देखिएकी थिइन् । लक गजबको उनको ! तेस्रो फिल्म उनले नवाजुद्दिन सिद्धिकीजस्तो खारिएको एक्टर लिड रोलमा रहेको ‘बोले चुडिया’मा खेल्न पाउने भएकी छन् । एकपछि अर्को खारिएका एक्टरसँग अभिनय गर्ने मौका पाएर उनको दिमाग तातेछ नमज्जाले । जसको परिणाम उनी फिल्मबाट निकालिइन् ।
फिल्मबाट निकाल्नुको कारण देखियो गैर व्यावसायिक व्यवहार । यस्तै ताल देखाउने धेरै एक्टर फिल्म नगरीबाट पलायन हुन बाध्य भएका घटनाबारे सायद मौनी जानकार छैनन् जस्तो छ । नसुध्रिए उनको फ्युचर अहिले नै फ्लप देखिन्छ । शुक्रबार बाट
स्वदेशमा सफल प्रदर्शनपछि हिरो नं. १ युरोपका दर्जनौं देशमा प्रदर्शन हुँदै
नायक जय किशन बस्नेतले निर्माण एवम निर्देशन गरेको पछिल्लो चलचित्र हिरो नं. १ नेपालमा सफल...
एक्सनमा असफल नम्रता
हरेक हप्तामा हलमा नयाँ फिल्म टुटेका छैनन्...
सन्नी लियोनीको इन्ट्री हुँदा हलमा थामिनसक्नुको भीड
नेपाली चलचित्र ‘पासवर्ड’ को बिहीबार राजधानीको कुमारी...
‘पासवर्ड’को प्रिमियरमा सहभागी हुन सन्नी लियोनी नेपालमा
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी नेपाल आएकी छन्...
१. भोलि बिहीबारदेखि मौसममा सुधार हुने
२. अध्यक्ष प्रचण्ड दाँतको उपचार गर्न अस्पतालमा, दाँत निकाल्नु पर्ने
३. विकासको गतिलाई तीव्र ढंगले अघि बढाउनु पर्दछ : प्रम ओली
४. बसाई छ एक दिन र एक रात, सवारी चलाउने चाँजोपाँजो भने उत्पात
५. सिंहदरबारमा संघीय संसदको भवन बन्ने
६. डा. रूइतको जीवनी असोज ११ गते सार्वजनिक हुदैँ
७. विरोधलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छः नेता श्रेष्ठ
८. पहिरोले पुरिएर एक बालकको मृत्यु
९. नारायणीमा हाम फाल्ने युवाको पहिचान खुल्यो (अपडेट)